डा. उपेन्द्र देवकोटाबारे फैलिएको अप्रिय हल्ला गलत ! अहिले स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि घाम ताप्दै !
काठमाडौँ । प्रख्यात न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको बारेमा सामाजिक सन्जालमा चलेको अप्रिय हल्ला झुटो भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ। पित्तथैलीको क्यान्सरबाट थालिएका देवकोटाको बाँसबासीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ। देवकोटाको स्वास्थ्य स्वास्थ्य अस्थिर रहने गरेको अस्पताल श्रोतले बताएको हो। लगभग पाँच महिना अगी बेलायतमा उपचार गराउन गएसँगै पित्तथैलीको क्यान्सर भएको पुष्ठी भए पश्चात देवकोटाले नेपालमानै उपचार गर्ने इच्छा राख्नु भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ।
डा. देवकोटालाई शुक्रबार राति भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको अस्पताल श्रोतले जानकारी दिएको हो। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएसँगै देवकोटासँग भेटघाट रोकेपछि देवकोटाको बारेमा सामाजिक अप्रिय हल्ला चलेको थियो। अस्पताल श्रोतका अनुसार अहिले देवकोटाको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। बिहानैबाट स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि चिकित्सकहरुले उहाँलाई घाम ताप्न अस्पताल परिसर बाहिर पठाएका हुन्।
प्रकाशित : शनिबार, जेठ २६, २०७५०८:३०
ट्रक त्रिशूलीमा खस्दा दुई बेपत्ता ! एक घाइते ! नदी बढेकाले खोजि कार्यमा कठिनाइ !
जति औषधि खाए पनि त्यस्ता चलचित्र हेर्ने बानी छुटेन।
जिप र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोकिंदा एकको मृत्यु १ जना घाइते !
ढुङ्गाले हानेर कुखुराको खुट्टा भाँचेको आरोपमा जेलको हावा खाँदै अकबाल !
आज साउने संक्रान्ति मनाइँदै, सुरु भयो चाडपर्वको लहर
दुई तिहाईसँग निहुँ खोज्ने जोगी डाक्टरलाई सरकारले देखाईदियो , खुसी लाग्यो : गगन थापा
अझै बुझाएनन् उम्मेदवारले खर्च विवरण